Sina 2021 Fomba vaovao fividianana akanjo ambony unisex vehivavy Skateboard lamaody lamaody lehilahy kiraro fanamboarana sy orinasa | JIAN ER
2021 Fomba vaovao fividianana hafanana vehivavy Unisex vehivavy Skateboard lamaody kiraro lehilahy mahazatra
FANAMARIHANA PRODUKTY https://www.jianershoes.com/uploads/33.mp4 Mpanamboatra OEM ODM Lightweight Unisex Pu Zapatos Black Sneaker Skateboard Casual Shoe.White dia manome ny olona fijerin'ny sary malemy, mora hifehezana ny endrika isan-karazany, mahazatra mahazatra ao amin'ny ny indostrian'ny lamaody, na pataloha na zipo dia azo anaovina amin'ny lamaody. Fitaovana vita amin'ny hoditra vita amin'ny synthetic malefaka, ahazoana aina sy kanto. Ny famolavolana rantsan-tongotra dia manify, mety amin'ny karazan-tongotra rehetra, mampihena ny fivontosan'ny rantsan-tongony, t ...
Mpanamboatra OEM ODM maivana Unisex Pu Zapatos mainty Sneaker Skateboard kiraro mahazatra.Ny fotsy dia manome ny olona sary malemilemy, mora mifehy ny endriny isan-karazany, dia kilasika marobe amin'ny sehatry ny lamaody, na pataloha na zipo dia azo anaovina amin'ny lamaody.
Fitaovana vita amin'ny hoditra vita amin'ny synthetic malefaka, ahazoana aina sy kanto. Ny famolavolana rantsan-tongotra dia manify, mety amin'ny karazan-tongotra rehetra, mampihena ny fivontosan'ny rantsan-tongotra, fanitarana ny rantsan-tongotra maimaimpoana, fandehanana milay, maneho fahaveloman'ny tanora.
Miaina anaty ny rivotra, tsy mora ny mitafy azy, ary ampiasaina ny lamba mba hanamaivanana ny tsindry amin'ny tongotra, ary mora ny dingana rehetra. Famolavolana dantelina mora, endrika tsotra, fahitana mamelombelona, ​​mora apetraka ary esorina. Outsole fingotra maivana voafantina, firafitry ny anti-skid tsotra, famolavolana maivana, hazavana sy fitehirizana asa, afaka mivezivezy malalaka.
Ny tokana dia vita amin'ny fitaovana tsy mahazaka akanjo, ny firafitra tsy mitovy mihazona tsara ny tany, tsy solafaka, ary ny famolavolana ombelahin-tongotry ny mpampiasa dia manana fonosana mahery sy tohana ho an'ny tongotra, manome hetsika azo antoka sy mahazo aina kokoa. Ny ambany matevina dia nitombo, ary ny tongotra lava sy lava dia noforonina tamim-pahakingana, ary miavaka ny toetra. Manohana azy manokana, azonao atao ny manova ny loko, ny habeny, ny fitaovana, ny fomba, ny logo araka ny ilainao.
Ny orinasanay dia manitrikitrika hatrany amin'ny politika momba ny kalitaon'ny "kalitaon'ny vokatra avo lenta dia ivon'ny fahaveloman'ny fikambanana; ny fahafinaretan'ny mpividy no ho teboka mikatona sy hiafaran'ny orinasa iray; ny fanatsarana maharitra dia ny fikatsahana ny mpiasa mandrakizay ”miampy ny tanjona tsy miovaova amin'ny hoe" laza aloha, mpividy aloha ", efa nitady mialoha izahay na dia ny fiaraha-miasa mihombo amin'ny mpanjifa any ivelany izay nofaritan'ny lafiny tsara. Raha sanatria ka liana amin'ny saika rehetra amin'ny vahaolana izahay dia tadidio ny hiaina malalaka tanteraka hiresaka aminay amin'ny zava-misy fanampiny.
Ny finoanay dia ny manao ny marina aloha, ka dia manome vokatra avo lenta ho an'ny mpanjifanay fotsiny izahay. Manantena tokoa isika fa afaka miara-miasa amin'ny orinasa. Mino izahay fa afaka mamorona fifandraisana amin'ny orinasa efa ela. Azonao atao ny mifandray aminay malalaka raha mila fampahalalana misimisy kokoa sy pricelist ny vahaolana eto aminay!
F1: azonao atao ve ny mampiasa ny sary famantarana amin'ny kiraronao?
A: Eny, manaiky ny hanao orinasa OEM izahay.
Azafady mba alefaso aminay ny volavolan'ny logo anao, ny mpamoron-tsainay dia hampivelatra ny sary famantarana amin'ny baikoo amin'ny maha matihanina.
F2: Azonao atao ve ny manao ny santionany amin'ny famolavolana anay?
A: Eny, andefaso aminay ny volavolanao CAD ary lazao anay ny hevitrao.
azonao atao ihany koa ny mandefa Afaka manitsy izahay mba hahafeno ny zavatra takinao, toy ny lokon'ny Pantone, marika famantarana.
F3: Afaka mahazo santionany ve aho?
A: Eny, ny sandan'ny santionany dia $ 100 $ ho an'ny sombin-javatra iray, miampy ny saram-pandraharahana USD $ 25.
Ny sarany santionany dia azo averina rehefa apetraka ny kaom-pamokarana.
Fotoana fitarihana santionany: 15 andro fiasana.
F4: Ahoana no hifehezana ny kalitaon'ny vokatrao?
A: Manana ekipa QC matihanina sy laboratoara anay izahay hizaha toetra ny kalitaon'ny santionany sy ny famokarana.
Raha mila tatitra momba ny fanandramana ianao dia azonao atao ny milaza aminay izay tadiavinao rehefa mametraka ny baiko ianao.
A: Ny vokatra rehetra atolotray dia manome antoka 5 kalitao aorian'ny fandefasana azy.
Raha tapaka ny kiraro ao anatin'ny 6 volana, mifandraisa aminay ny mpivarotra.
F6: Inona ny MOQ-nao?
A: MOQ dia tsiroaroa 500 isaky ny loko .2000 tsiroaroa isaky ny fomba.
Teo aloha: Sneaker vehivavy lamaody malaza sy milamina, vehivavy manao kiraro ho an'ny lehilahy
kiraro mahazatra ho an'ny lehilahy
kiraro fotsy chunky
kiraro tokana olona kiraro mahazatra
lehilahy kiraro mahazatra lehibe
kiraro lehilahy kiraro fanatanjahan-tena mahazatra
kiraro ho an'ny lehilahy amin'ny fahavaratra fanatanjahan-tena
kiraro lehilahy am-boalohany tsy mahazatra
kiraro skateboard ho an'ny olon-dehibe
kiraro skateboard ankizy
kiraro fotsy ho an'ny lehilahy lamaody vaovao
kiraro fotsy unisex olon-dehibe
kiraro fanatanjahan-tena fotsy ho an'ny lehilahy
ny vehivavy manala kiraro lamaody hafa
kiraro kiraro mahazatra an'ny vehivavy mandeha an-tongotra